Iinkcukacha kumlo weWWE weDynamite Kid kunye noJacques Rougeau - Wwe
'Wayengazange abe ngumfana omnye' -Iinkcukacha kumlo wasemva kwesiteji okhokelele kwiDynamite Kid ishiya iWWE
Isiqendu samva nje se-VICE sibonise 'Icala eliMnyama leRingi' ibandakanya iinkcukacha kwiDynamite Kid kunye noJacques Rougeau's umlo odumileyo wasemva kweWWE.
Ngo-1988, iDynamite Kid (igama lokwenyani uTom Billington) wadlala kwiWWE ecaleni kukaDavey Boy Smith njengeBritish Bulldogs. I-Fabulous Rougeaus, equka uJacques Rougeau noRaymond Rougeau, yayingamalungu eqela lethegi yeWWE ngelo xesha.
Ngesinye isihlandlo, iDynamite Kid yambetha yaza yamkhaba uJacques Rougeau ngasemva, yabangela ubuso bakhe ukuba budumbe kakhulu. URougeau uziphindezele ngokusebenzisa umqulu wekota ukunkqonkqoza amazinyo eDynamite Kid xa ephinda embona kumabonakude.
Kwisiqendu esikhethekileyo 'soMnyama weRingi,' owayesakuba ngumfazi kaDynamite Kid, uMichelle Billington, uthe wamnika umpu kuba ekholelwa ukuba ubomi bosapho lwabo busemngciphekweni.
Ndandifana, ‘Andifuni laa mpu. Ndandisoyika kakhulu, ’utshilo uBillington. Uyahamba, ‘andifuni kukoyikisa. Ndithethile no [owayesakuba yi-WWE Superstar] uDino Bravo ... ’Uthe wabona imvulophu enegama likaTom, idilesi yethu, kwaye ngaphakathi kuyo yayinomfanekiso wendlu yethu, mna nabantwana. [Umyalezo ongaphakathi kwimvulophu wathi] 'Ukuba kukho nayiphi na impindezelo, nantoni na, usapho lwakho luza kufa.'
IDynamite Kid yazuza udumo kwihlabathi liphela ngesimbo sokuzincama, sokuzincama, kodwa ukungqubana ngaphandle komsesane kwakuyitshabalalisa usapho, umzimba wakhe, kwaye kuguqule ilifa lakhe ngonaphakade.
Inxalenye yokuqala yeSizini 3 iqukunjelwa ngoLwesine, ngo-9 ngokuhlwa @VICETV kwaye @CraveCanada . pic.twitter.com/AePxTMa4BS
Icala elimnyama leRingi (@DarkSideOfRing) Nge-6 kaJuni, ngo-2021
I-WWE Hall ye-Famer uMick Foley usebenze neDynamite Kid ngo-1986, kwaye wathi isiNgesi asizange sibe ngumfana ofanayo emva kwesi siganeko noJacques Rougeau.
Isongelo sikaJacques Rougeau kwiDynamite Kid sasingeyonyani
Abazalwana baseRougeau ngokuchasene neBritane Bulldogs
UDynamite Kid washiya iWWE ngenxa yoloyiko lokuba umntu angabulala usapho. UMichelle Billington wongeze ngelithi usapho kuye kwafuneka ludlulele kwenye indlu kuba bengasaziva bekhuselekile.
Ecacisa ngendima yakhe ekuhambeni kweWWE eDynamite Kid, uJacques Rougeau uthe izoyikiso kusapho lwembangi yakhe zazingeyonyani. Wayengafuni iDynamite Kid ukuba iziphindezele emva komlo wabo weqonga, ke wenza ngathi unonxibelelwano nomntu othile kwi-mafia.
Andimthandi uDino Bravo kodwa bendisazi ukuba usisitokhwe, utshilo uRougeau. Bendisazi ukuba usisitokhwe seBulldogs. Nantoni na endiyithethileyo kuye, wayeza kuyibuyisela kwiBulldogs. Ndithathe iphepha ndabhala igama phantsi. Ndabhala igama eliyintsomi, igama eliyiliweyo, ndaza ndaxelela uDino, ndathi, ‘Uyalibona eli gama apha? Kuya kufuneka ndimtsalele umnxeba rhoqo ebusuku. Ukuba andimtsaleli umnxeba ngobusuku obunye, izinto ziya kulungiswa. ’Kwaye kuyandivuyisa ukuva ukuba kuyasebenza.
Ndicinga ukuba wayesazi ukuba kukho into engalunganga kuye. Wayengenguye la mntu. Obu bundlobongela babungalawuleki. Andiqondi ukuba wayenolawulo lwayo kwakhona.
-UMichelle Billington, owayesakuba ngumfazi weDynamite Kid. Ngomso, ngo-9pm ngoku @VICETV kwaye @CraveCanada . pic.twitter.com/sLeePv6M8v
Icala elimnyama leRingi (@DarkSideOfRing) NgoJuni 9, 2021
Rougeau Uthethe neSportskeeda Wrestling kaGqirha uChris Featherstone kwangoko kulo nyaka malunga nobutshaba bakhe neDynamite Kid. Bukela le vidiyo ingentla ukuze ufumane iinkcukacha ezithe kratya kubudlelwane babo emva kwezigcawu.
Nceda uthenge ngecala elimnyama leRingi kwaye unike i-H / T kwi-Sportskeeda Wrestling yokukhutshelwa ukuba usebenzisa iikowuti ezivela kweli nqaku.
Ukuhlala uhlaziywa ngeendaba zamva nje, amarhe, kunye neengxabano kwiWWE yonke imihla, Rhuma kwisiteshi se-YouTube se-Sportskeeda Wrestling .
UJim Ross ucacisa ukuba kutheni uSteve Austin vs Hulk Hogan engazange yenzeke eWWE
Iitotali zeDivas zizonke ebezinyani kwaye ezi-2 zibekiwe
Iziphumo zeWWE RAW nge-3 kaDisemba ngo-2018, abaphumeleleyo bangoMvulo bangoMvulo, ukuqaqanjelwa kwevidiyo
'Siza kuyifaka kwifilimu kwaye siyithengise': UBelle Delphine uchaza indlela asabela ngayo umfana athandana naye xa edubula ividiyo ecacileyo
Iindlela ze-14 ezisebenzayo zokuSombulula ityala lokuKopela
'Andikaze ndicele ukuba kule klasi!
Izimvo ezinyanisekileyo zikaBret Hart malunga ne-Sting kunye ne-Scorpion Deathlock zivelisiwe (Exclusive)
I-30 Hlala Ekhaya Umhla Izimvo zasebusuku zeZibini ezonwabileyo
Ngaba Unayo i-Imposter Syndrome? Ezi ngcinga zili-13 zinokucebisa ukuba Wenze…
Iindaba zeWWE: Itreyila entsha ikhutshelwe uxwebhu olubhaliweyo lweAndre The Giant HBO
Iimpawu ezi-5 eziBalaseleyo zikaJeff Hardy kwiWWE
Uphi ilitye elibandayo uSteve Austin?
ayibalulekanga njengoko ubucinga
tyikitye umyeni wam wangaphambili ufuna ndibuye
kwenzeka ntoni ku james ellsworth chin
indlela yokungavumeli amagama abantu ukuba afike kuwe
Ndityhola intombi yam ngokukhohlisa kwaye ndiphazama
uxelele njani ukuba unomdla
umfana endithandana naye ubeka usapho lwakhe phambi kwam